के हो विपश्यना ध्यान, विपश्यना कसरी गर्ने, ध्यान गर्दा के फाइदा हुन्छ ? « रिपोर्टर्स नेपाल
विपश्यना ध्यान योग
एजेन्सी, २ मंसिर । ध्यानका प्रकारहरू र ध्यान गर्ने विधिहरूमा धेरै भिन्नता छ। धेरै प्रकारका ध्यानहरू छन्, जसमा धेरै प्रकारका विधिहरू पनि छन्। योग र ध्यानको तन्त्रमा हजारौं विधिहरू वर्णन गरिएको छ। हिन्दू, जैन, बौद्ध र ऋषि सङ्गतमा धेरै संस्कार र अनुष्ठानहरू छन्। विधि र कार्य भनेको तपाईको शारीरिक र मानसिक निद्रालाई भत्काउनु हो ताकि तपाई ध्यानमा रहनु होस्। भगवान शंकरले माता पार्वतीलाई ध्यानका ११२ विधि बताउनुभएको थियो, जसलाई ‘विज्ञान भैरव तन्त्र’ मा संग्रहित गरिएको छ। ओशो रजनीशले आफ्नो प्रवचनमा ध्यानका १५० भन्दा बढी विधिहरू वर्णन गरेका छन्। ती मध्ये एक विधिलाई विपश्यना ध्यान विधि भनिन्छ। आउनुहोस् जानौं यसको बारेमा ७ विशेष कुराहरू।
१. अनपानसती ध्यान योगः विपश्यना ध्यान एक धेरै प्राचीन ध्यान विधि हो। करिब साढे २ हजार वर्षअघि भगवान गौतम बुद्धले देशको यो अति प्राचीन साधना विधिलाई नयाँ रूप दिएर प्रचारप्रसार गरेका थिए । विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि हो जुन भगवान बुद्ध द्वारा पुनर्जीवित गरिएको थियो। त्यसबेला यसलाई आनापानसती ध्यान योग भनिन्थ्यो। भगवान बुद्धले यसलाई सरल बनाउनुभयो।
२. चमत्कारी ध्यान विधिः यो एक मात्र चमत्कारी ध्यान विधि हो जसको माध्यमबाट अधिकांश मानिसहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरेका छन् वा बुद्धत्व प्राप्त गरेका छन्। अहिलेको युगमा यो विधि झनै प्रभावकारी छ, विचारले भरिपूर्ण आधुनिक मानिसलाई यसको थप आवश्यकता छ ।
३. आत्मनिरीक्षणको प्रभावकारी विधिः विपश्यना आत्मनिरीक्षणको प्रभावकारी विधि हो। यसले आत्म–शुद्धिको नेतृत्व गर्दछ। यो प्राणायाम र साक्षीको संयोजन हो। वास्तवमा, यो साक्षीको अंश हो। अनादिकालदेखि नै ऋषि–मुनिहरूले यो तपस्या गर्दै आएका छन् । यस विधि अनुसार, तपाईंले आफ्नो सास हेर्न र यसको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। हेर्नु भनेको यसको आन्दोलनलाई महसुस गर्नु हो। सासको चाल हेर्नु भनेको विपश्यना हो।
४. विपश्यना कसरी गर्नेः विपश्यना एक धेरै सरल विधि हो। प्रारम्भिक अभ्यासमा, उठ्ने, सुत्दा, उठ्दा, बोल्दा वा मौन अवस्थामा कुनै पनि अवस्थामा नाकको प्वालमा सास आउँदै गरेको महसुस गर्नुहोस्। जसरी अहिले सम्म तपाईले आफ्नो श्वासप्रश्वासमा ध्यान दिनुभएन तर अब स्वाभाविक रूपमा यसको गतिलाई साक्षी भावले हेर्नुहोस् वा श्वास छोड्ने महसुस गर्नुहोस् र यसलाई लिनुहोस्। सास फेर्न र सास फेर्न बीचको अन्तरमा ध्यान दिनुहोस्। यो जबरजस्ती नगर्नुहोस्। बस, जब ध्यान आउँछ, सबै कुरा बन्द गरेर ध्यान गर्नु नै विपश्यना हो।
सास फेर्न बाहेक, दोस्रो चरणमा यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि यो एक विचार आउँछ जान्छ, अर्को आउँछ। यो क्रोध आयो र गयो। कुनै पनि हालतमा संलग्न हुन हुँदैन। तपाईको दिमाग, मस्तिष्क र शरीरमा कुनै प्रकारको क्रिया र प्रतिक्रिया भइरहेको छ भनेर चुपचाप हेर्नुहोस्।
५. विपश्यना कुनै विधि होइन, यो प्रकृति होः विपश्यना गर्नको लागि कुनै प्रकारको झमझम वा एकान्तमा बस्न आवश्यक छैन्। यसको राम्रो अभ्यास भीड र कोलाहलमा बसेर मात्र गर्न सकिन्छ। मोटरसाइकल चलाउँदा, बसमा बस्दा, रेलमा यात्रा गर्दा, कारमा यात्रा गर्दा, सडकको छेउमा, पसलमा, अफिसमा, बजारमा, घरमा र ओछ्यानमा सुत्दा पनि गरिरहनुहोस् । तपाईले ध्यान गरिरहनु छ भन्ने कतै र कसैलाई थाहा हुँदैन् ।
६. विपश्यना किन गर्नेः श्वास शरीर र आत्मा बीचको एक मात्र पुल हो, जसले हाम्रो विचार र भावनालाई मात्र नभई हाम्रो शरीरलाई जीवित राख्छ। सास नै जीवन हो। ओशो भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईंले सासलाई राम्रोसँग हेरिरहनुभयो भने, अवश्यम्भावी रूपमा, तपाईंले आफूलाई शरीरबाट अलग भएको थाहा पाउनुहुनेछ। सास देख्ने श्वासबाट अलग भएको छ, श्वासबाट अलग हुने शरीरबाट अलग भएको छ। शरीरबाट मुक्ति, सासबाट मुक्ति, तब शाश्वत देखिन्छ। त्यो दर्शनमा उडान, उचाइ र गहिराई छ। बाँकी संसारमा न त उचाइ छ, न त संसारमा गहिराइ नै छ।
७. विपश्यनाका फाइदाहरूः यसले तनाव हटाउँछ। नकारात्मक र बेकार विचार आउँदैन। मनमा सधैं शान्ति हुन्छ। मन र दिमागलाई स्वस्थ राख्दा यसले शरीरमा पनि असर गर्छ । शरीरका सबै पीडा हटेर शरीर स्वस्थ हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि निरन्तर गरिरहनुभयो भने आत्मसाक्षात्कार सुरु हुन्छ र सिद्धिहरू स्वतः सिद्ध हुन्छन्।